भिडियो Archives - Halesi News
चितवन। आज रवि लामिछाने सहित युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीलाई आज जिल्ला अदालत चितवनमा पेश गरिँदैछ । जिल्ला अदालत चितवनले उनीहरुलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न दिएको म्याद सकिएको छ । यसैबिच सुरक्षा व्यवस्थालाई मध्य नजर गर्दै हेटौंडाबाट हजार प्रहरी झिकाइएको छ । आज उनीहरुलाई अदालत पेश गर्ने क्रममा हुन सक्ने अप्रिय घटनालाई रोक्न ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।तीन जना अभियुक्त मध्ये युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीको बयान पूरा भएको भए पनि रविको बयान आंशिक रुपमा मात्रै सकिएको बताइएको छ । बयान नसकिएकै कारण पनि उनीहरुलाई थप अनुन्धानको लागि म्याद थप गरिने सम्भावना देखिएको छ । यसैबिचमा प्रहरीले दिपक बोहरालाई रविलाई भेट्न दिएको छैन्भने नायक रमेश उप्रतिले भटे गरेका छन् । भेटमा रमेशले रकिो आखा सत्य देखेको बताएका छन् रविले आफ्नो कारणले कसैलाइ चोट नलागोस भन्ने चाहेको बताएका छन् । उ
आवाज न्यायको लागि हो । शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा गहन रुपमा सत्य तथ्य छानबिन होस । हामी सबैका प्रिय सँचारकर्मी रबि लामिछाने दाईले देश र जनताका लागि गर्नु भएको सत्कर्महरुको हामी प्रशँसा गरेर थाक्दैनौं” चर्चित सँचारकर्मी तथा समाजसेवी शिशिर भण्डारी चितवन पुगेर न्यायको पक्षमा बोलेका छन् । उनले शान्तिपुर्ण ढँगले शालिक राम पुडासैनी प्रकरणमा सत्यतथ्य छानबिन होस र दोषीलाई कारवाही होस, निर्दोष नफसोस भनेका छन् ।शिशिर चितवन पुग्दा रबि र शिशिरका समर्थहरुले उनलाई तालीले स्वागत गरेका थिए । आजै चितवन पुगेका शिशिरले प्रहरी प्रशासनको सम्मान गर्दै, देशको न्यायालयको सम्मान गर्दै, यथार्थ तरुन्तै पत्ता लगाउन भने । उनले भने, यदि रबि लामिछाने जस्ता देशको लागि मरिमेट्ने सपुतलाई फसाउने ष ड्यन्त्र भएको हो भने, शिशिर भण्डारी जस्ता देशको लागि केहि गर्छु भन्नेले म रे हुन्छ । भिडियो हेर्नुस https://youtu.be/Se
देशका जल्दाबल्दा युवा शक्ति बिदेशी मरुभूमिमा साठी सतरीको बुडो नेता बनाउछ ... https://youtu.be/pNPz4MCOUFs
पैसाको अभावमा मृत्युसँग लडिरहेका यि कलाकारको घरमा यति धेरै सहयोग लिएर पुगे- शिशिर भण्डारी (भिडियो हेर्नुस) सबैले शेयर गरौं । सयौं फिल्म खेलेका यि कलाकार डाईपर लगाएर ओछ्यानमा थलिएका छन् । दर्दनाक अवस्थामा भगवान बनेर पुगे, शिशिर ।
पैसाको अभावमा मृत्युसँग लडिरहेका यि कलाकारको घरमा यति धेरै सहयोग लिएर पुगे- शिशिर भण्डारी (भिडियो हेर्नुस) सबैले शेयर गरौं । सयौं फिल्म खेलेका यि कलाकार डाईपर लगाएर ओछ्यानमा थलिएका छन् । दर्दनाक अवस्थामा भगवान बनेर पुगे, शिशिर । नियमित चेकअप गराउनुपर्छ, औषधी खानुपर्छ तर चन्द परिवारसंग उक्त सामथ्र्य छैन । सन्तानको रुपमा एक छोरी मात्र हुन्, चन्दका । छोरीले नै आमा, बुवा स्याहारिरहेकी छिन् । ज्वाईको जागिरबाट आएको पैसाले उपचार खर्च बेहोरिरहंदा चन्दलाई गाह्रो छ । जयनन्द चन्द बोल्न सक्नुहुन्न । केहि समय अगाडिसम्म वाकरको सहायताले हिड्नुहुने चन्दका पाईलाहरु अब सर्न छाडिसके । स्वस्थ रहुन्जेल कलाकारितामा समर्पित चन्दे भागी भागी नजाऊ चलचित्रपछि कुनै पनि चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएको छैन । यद्यपी उहांलाई स्वस्थ भएर अझै फिल्म खेल्न मन छ । एउटा कलाकार पैसाको अभावमा उपचार बिना छटपटाईरहनु भएको छ भन्ने थाहा
पथरी – गत शनिबार विहान मोरङको पथरी १ मा नग्न अवस्थामा मृत भेटिएकी रिना बस्नेत (रुपा) को मृत्यु बारेमा प्रहरीले नयाँ रहस्य सार्बजनिक गरेको छ । प्रहरीकाअनुसार वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट रिनाको पोष्टमार्टमको प्रारम्भिक रिर्पाेट आएको छ तर, हत्या गरेर फालेको प्रमाण भेटिएको छैन । स्थानीयले उनको बलात्कारपछि हत्या गरेर सडकको हालेको हुनसक्ने आशंका गरेका थिए । तर प्रारम्भीक रिपोर्टमा बालात्कार भएको प्रमाण पनि देखिएको छैन । पोष्टमार्टम रिर्पोटले घरमाथिबाट झरेको आशंकालाई बल पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायव उपरीक्षक श्रेष्ठले बताए । यद्यपि फरेन्सिक जाँचका लागि नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ । मदिरा सेवन गरे नगरेको विषय फरेन्सिक रिपोर्ट आएपछि थाहा हुनेछ । घटना भएको रातको सिसी क्यामेरा फुटेजमा रिनाको शव भेटिएको सडकमा मध्यरातमा एउटा रिक्सा ग
काठमाडौँमै घट्यो यस्तो डरलाग्दो घटना : निर्दयी बुवा जसले आमाको टाउको काटेर झन्डै छोराछोरीलाई काटेन…(हेर्नुहोस् भिडियो)
काठमाडौं – गोदावरी नगरपालीका गोदामचौरमा एक श्रीमानले आफ्नै श्रीमतीको टाउको काटेका छन् । श्रीमानले श्रीमतीको टाउको काटेर हातमा लिएर हिडिरहेको अवस्थामा अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सिन्धुली घर भाइ हाल गोदावरी नगरपालीका वडा नं १ गोदामचौरमा बस्दै आएका ४२ बर्षीय जयबहादुर वाईवाले आफ्नी श्रीमती ४० बर्षीया सुनमाया वाईवाको टाउको काटेर लिएर हिँडेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । वाईवा गोदावरी नगरपालीका वडा नं -१का वडा अदक्ष्य हरिहर कार्कीको जग्गा भाडामा लिई सोही स्थानमा ईँटा बनाउने काम गर्दथे । बाँडेगाउँ प्रहरीका अनुसार उनी मानसिक रोगी भएको आशंका गरिएको छ। काठमाडौँमै घट्यो यस्तो डरलाग्दो घटना : निर्दयी बुवा जसले आमाको टाउको काटेर झन्डै छोराछोरीलाई काटेन…हेर्नुहोस् भिडियो… https://youtu.be/GKnLRj6KsS0 sabhar light nepal bata Traveling gives us the opportunity to disconnect f
इटहरी । ‘मलाई माफ गर्नुस् आमा मैले गल्ती गरेँ। मैले नगर्ने काम गरेछु। धर्म परिवर्तन गरेर भुल गरेँ, मलाई माफ गर्नुस्।’ आमालाई अँगालो हाल्दै चिच्याउँदै थिए, अभिषेक कार्की। आमाको मनको बाँध पनि भत्कियो। ‘यिनै क्रिस्चियनले गर्दा मेरो सम्पत्ति सकियो। मलाई सुकुम्बासी बनाउने यिनै हुन् उनी पनि रुन थालिन्। नजिकै रहेकी बुहारी आयुशाले उनलाई सम्हाल्ने कोसिस त गरिन्। तर, सकिनन्। बरु आफै रोइकराइ गर्न थालिन्। ‘मलाई क्युरेट गर्न लगाउने यिनै पापी हुन्, उनी भक्कानिँदै भन्न थालिन्, मेरो बच्चा जन्मिँदा मलाई हेला गर्ने यिनीहरु नै हुन्। वरिपरिको भिड उनीहरुतिरै केन्द्रित भयो। कसैले कसैसँग बोल्न सकेनन्। बरु धेरैका आँखा रसाए। घटना बैसाख ९ गते सोमबारको हो। इलाका प्रहरी कार्यलय इटहरी अगाडिको दृश्य। अत्यन्तै दर्दनाक पीडा पोखिएको भान हुने यो दृश्यको कारण रहेछ, इसाइ धर्म परिवर्तन। जसका मुख्य नाइके हुन्, कोरियाली ध
चर्चित नृत्याङ्गना निलम ढुंगाना एक खुट्टाको सहाराले सवलाङ्ग सरह उत्कृष्ट नृत्य गरेर देश विदेशमा ख्याती कमाएकी निलमको बलराम बस्नेतसँग १० वर्षअगाडि वैवाहिक सम्बन्ध जोडिएको थियो । उनीहरुको एक छोरी छिन् । ०६४ सालमा भयंकर दुर्घटनामा परेर पनि बाँच्न सफल निलमको दुर्घटनामा परेको एउटा खुट्टा गुमेको थियो । स्कुल जान पुलको पेटीबाट हिँडिरहेकी निलम र उनकी साथी अन्जना राईलाई ओभर लोड भएको ट्रकले किच्दा अन्जनाको दुर्घटना स्थलमै मृत्यू भएको थियो । नीलम बाँच्न त सफल भइन् तर देब्रे खुट्टा सधैंका लागि गुमाएकी थिइन । भिडियो हेर्नुहोस https://youtu.be/I6eBAo84d1Y sabhar light nepal bata Traveling gives us the opportunity to disconnect from our regular life. You get to forget your problems/issues forafew weeks, it can also help you figure things out that you would not have understood without the di
मृत्युपछि के हुन्छ ? गौतम बुद्धले दिएको उत्तर यस्तो छ
काठमाडौं । मृत्युपछि के हुन्छ ? यसको उत्तर दिन सहज छैन । महामानव गौतम बुद्धलाई भागवानको रुपमा हेरिन्छ । बुद्धको जीवन र जगतलाई हेर्ने नजर निकै सटीक र सुझबुझपूर्ण लाग्छन् । उनै बुद्धलाई एक दिन शिष्यले सोधे– ‘मृत्युपछि के हुन्छ ? यसबारे किन केही बताउनु हुन्न ?’ आफ्नो शिष्यको कुरा सुनेका बुद्धले हास्दै उत्तर दिए, ‘पहिले मेरो एउटा प्रश्नको जवाफ देऊ, त्यसपछि म बताउने छु मृत्युपछि के हुन्छ भनेर ।’ शिष्यले ’हवस् ’ भनेपछि बुद्धले सोधेछन्, ‘मानौं तिमी कतै जाँदैछौ । विषले भरिएको एउटा तीर तिम्रो शरीरमा आएर लाग्यो । अब भन, पहिला त्यो तीर निकालेर फाल्छौ कि यो कताबाट आयो, कसलाई निशाना बनाइएको थियो, यो यहाँबाट पार गरेको भए कसलाई लाग्थ्यो, के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नतिर लाग्थ्यौ ?’ शिष्यले जवाफ दिए, ‘म पहिला विषले भरिएको तीर नै शरीरबाट निकालेर फाल्थें, नत्र सबै विष मेरो शरीरमा फैलिहाल्छ नि